Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo oo u ambabaxay Magaalada Addis Ababa – Geelle Mag
Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo oo u ambabaxay Magaalada Addis Ababa
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay Magaalada Addis Ababa ee Xarunta dalka Itoobiya, halkaas oo ay kaga qeyb galayaan Shir Madaxeedka Urur Goboleedka IGAD.
Madaxda dalalka IGAD ayaa ka arrinsanaya qorshe cusub oo dib u habeyn loogu sameynayo Urur Goboleedka IGAD, kaas oo ku saleysan in Ururku uu si siman uga turjumo dhammaan danaha dalalka ku bahoobay.
Sidoo kale, Madaxdu waxa ay ka arrinsan doonaan xoojinta iskaashiga ka dhaxeeya dalalka Gobolka ee dhinacyada dhaqaalaha iyo nabad-galyada.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la wadaagaya Madaxda dalalka IGAD aragtida Dowladda Soomaaliya ee ku saleysan dib u habaynta Ururka Goboleedkan, si uu u noqdo madal ay ka muuqdaan danaha wadajirka ah ee dalalka Gobolka.
Sawiro:-Duqa Muqdisho oo kulan muhiim ah la qaatay Francisco Mandeira